Malagasy Archives - Page 22 of 27 - Book News Madagascar
By Book News, 3 years 11 months ago
“Sady efa manamboatra izy ireo, no mbola manakan-dàlana. Ny olona mandeha eny afovoan-dàlana. Tsara ilay làlan’ny mpandeha an-tongotra vaovao, fa ilaina ihany koa ny fandinihana satria lasa tery ilay làlana, nefa, hatreto, dia mbola làlana azo ifanenana tsara ity làlana ity”, hoy ny mpaka mpianatra iray ao amin’ny sekoly Saint-Michel. Read more…
3,5 tapitrisa dolara ny tontalin’ny fanampian’ny Amerikana entina iadiana amin’ny pesta
Mila mailo hatrany manoloana ny valan’aretina pesta, na dia efa mihena ary ny isan’ny trangan’aretina hita. Ho fitohizan’ny fandraisana fepetra, nanolotra 2 tapitrisa dolara indray ny Masoivoho amerikanina omaly. Mahatratra 3,5 tapitrisa dolara ny tontalin’ny fanampian’ny Amerikana eto Madagasikara ankehitriny, noho izany. 3,5 tapitrisa ho fiadiana amin’ny pesta Nanolotra 2 Read more…